सम्पादकीय | Everest Times UK | Page 3
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेलायतको चुनावी सरगर्मी अहिले व्यापक छ । चुनावी सरगर्मीले सबैको चासो पनि बढेको छ । उम्मेदवारहरु चुनावी रौनक आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न दौडधुपमा छन् । चुनाव साम...	Read more
अहिले देशले नयाँ रुप धारण गरेको छ । दुई तिहाईको सरकार बनेको पनि डेढ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा देशले नयाँ गति लिन थालेको स्पष्ट भएको छ । देशले अरु नयाँ प्राप्त नगरे पनि देशको राजनीतिक परिवर्...	Read more
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले १० वर्षे जनयुद्ध गरेको कुरा हामीबाट छुपेको छैन । यो युद्धले नेपाली समाजमा कति फाइदा भयो ? कति बेफाइदा भयो ? भन्नेबारेमा छुट्टै बहस छ । त्यसको लेखाजोखा समा...	Read more
विगतको तुलनामा देशको पछिल्लो शान्ति सुरक्षामा सुधार आएको विभिन्न तथ्यले पुष्टि गरेको छ । शान्ति सुरक्षाको सुधारसँगै विकासले गति लिएको विश्वास समेत गर्न थालिएको छ । विकासका लागि शान्ति सुरक्ष...	Read more
कुनै बेला जनयुद्ध सँगसँगै लडेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र नेकपाका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव अहिले एकअर्काका दुश्मन हुन् । एकले अर्कालाई सिध्याउने रणनीतिमा बादल र विप्लव छन् । विप्लव बाद...	Read more
देश बनाउने भन्दै निकै चर्का भाषण भए । सुन्दा कर्णप्रिय नारा लागे । जनताको आमूल परिवर्तनका लागि व्यापक संघर्ष भए, आन्दोलन भए, बलिदानी भए । धेरैले रगत बगाए । तरपनि अहिलेसम्म न त परिवर्तनको अनु...	Read more
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको योगदानको स्मरण गरी ३७औँ स्मृति दिवस सोमबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर...	Read more
वर्षासँगै आएको बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले यतिखेर नेपालीको मन थिलथिलो बनाएको छ । देशभर नै बाढी पहिरोको चपेटामा नेपाली छन् । तराईका भूभाग बढी प्रभावित बनेका छन् । अझ यसपटक काठमाडौंमा...	Read more
१० वर्षे जनयुद्धको एउटा कमाण्डर भने अहिले पनि युद्धकै मोर्चामा छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै नामबाट आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । जनयुद्धले मात्र जनअधिकार स्थापित हुन सकेन भन्दै समा...	Read more
सर्लाहीमा केही दिनअघि प्रहरीले भिडन्तको नाममा विप्लव समूहका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेललाई गोली हान्यो । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । उनको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमै भयो वा भिडन्तको नाममा मारिए...	Read more